Kutengesa kweSmartwatch kucharamba kuchikura mumakore anotevera | Ndinobva mac
Kutengesa kweSmartwatch kucharamba kuchikura mumakore anotevera
Juniper Tsvagiridzo Inoti Smartwatch Kutengesa Zvicharamba Zvichikura Pamakore inosvika mamwe mamirioni gumi nematanhatu akatengeswa muna 166. Izvi zvinoreva kuti makambani ari parizvino ari kunakidzwa nekutengesa kunoshamisa acharamba achikura nekufamba kwenguva uye mamwe mabrand anowedzerawo mukutengesa.
Parizvino Apple Watch, zvishongo zveFitbit kana zvishandiso zveSamsung zviri kutora chikamu chikuru chekeke iri Mawadhi evakomana veCupertino ndivo ari kukura zvakanyanya mukutengesa mumakore achangopfuura. Asi mune ramangwana zvinhu zvinoita kunge zviri kuramba zvichivandudzika saka mamwe makambani ajoina bandwagon uye ndezvekuti Huawei, Garmin uye mamwe mabhenji ari kujoina kuyedza kuenda kune apfuura.
Nhamba idzi dzakanaka kune wese munhu, asi Apple iri pamberi
Ichokwadi kuti vazhinji ndivo vagadziri vanobatanidzwa mumujaho wekuve iwo anotengesa akanyanya mawatchwatches, asi pane ese anotengesa zvakanyanya ndeaApple. Kune rimwe divi isu tine manhamba e 24 mamirioni mayuniti ewatchwatch akatengeswa muChina iyi 2018, chimiro chiri pamusoro pepedyo nemamiriyoni makumi maviri emayuniti akatengeswa muUnited States, zvinoreva kuti mune ramangwana nhamba idzi dzichafarira China.
Ndokusaka vachitaura nezvazvo 166 mamirioni mayuniti akatengeswa ne2023 kana zvasvika kumawatch akangwara mune zvese. Izvo zvinotonga nhasi izvo Apple, Fossil, Fitbit uye Samsung zvichaenzana kana kusimbiswa nevamwe vakaita saHuawei, Garmin kana Huami, izvo zvinoita kuti zvinhu zvese zvinyatso simbisa mune ino chikamu kwatinorangarira kuti Apple yakasvika gare gare kupfuura iyo yese asi iyo yakakurumidza kutora kutungamira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kutengesa kweSmartwatch kucharamba kuchikura mumakore anotevera
WatchOS 3 uye tvOS 5.2 beta 12.2 yevagadziri
Lifx Beam, yakanakisa yekushongedza nzvimbo yemusha uye inoenderanawo neKeKKit